मुक्तिनाथ विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २६ माघ २०७७)
कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिन सोमबारको तुलनामा ३ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ४३२ पुगेको हो । कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट यस वर्ष शेयरधनीलाई ११ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर र ४ दशमलव २६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. ४ अर्ब ८१ करोड १५ लाख रहेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रु. ५२ करोड ५५ लाख रहेको छ । सोही अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रु. २५ दशमलव ५९ (वार्षिक), तरलता अनुपात २३ दशमलव ७४ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. १३० दशमलव ४२ रहेको छ ।
कम्पनीको ६० दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा टुप्पी र पुच्छर भएको लामो शरीरको सेतो मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो मैनबत्तीले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरबौज्टजोन ७१ द्यशमलव २३ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद चाप उच्च रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ७ दशमलव ५२ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कामा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । मंगलबारको शेयर मूल्य रु. ४३१ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ४११ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।